Bluecore bụ Oge Mkpebi Mkpebi nke BluTore maka eTail | Martech Zone
Bluecore bụ Oge Mkpebi Ikpebi nke Bluecore maka eTail
Bụ marketer. Kedu ihe ị ga-eme ọzọ? Nke a bụ ajụjụ ndị ahịa na-ajụ onwe ha mgbe niile. Ihe ndekọ data na-abanye n'ime òtù dị iche iche na ọsọ ọsọ na olu, na usoro ịhazi na ime ihe na data a nwere ike ịkpọnwụ.
Maka ndị na - ebido ebido, ị ga - amata ihe dị iche iche gbasara ndị ahịa gị.
Ole ndị bụ ndị ahịa m kacha baa uru?
Ole ndị bụ ndị ahịa m na-azụta ihe ndị e wedatara ala?
Kedu ndị ahịa m na-achọ ida?
Na ndepụta na-aga n'ihu.
Ọ bụrụ na ịnwere ike ịnakọta data ọtụtụ ọwa ma nwee nghọta banyere onye bụ onye ahịa gị, gịnị ka ị ga - eme na ozi ahụ? Pụtara, olee otu ị si eme ya? Nke a bụ atụmatụ mgbasa ozi gị: Whonye ka ị na-elekwasị anya, site na nke ọwa ị na-ezipụ ozi ndị ahụ na mgbe ị na-eme ihe? Ihe omimi a nke ihe omuma, omuma, na ikike abughi otutu ndi ahia.
Na nzaghachi maka ihe ịma aka nke ụlọ ọrụ a, Bluecore, onye na-eweta nkà na ụzụ SaaS dị afọ anọ, kwupụtara ọkwa Platform ọhụrụ ya maka ndị na-ere ahịa iji nyere aka zaa ajụjụ nke "gịnị na-esote?" Nkọwa ya dị iche iche na-enye ndị na-ere ahịa ahịa aka ijikwa data ma nyefee ndị mmadụ gafee ọwa, na-enweghị itinye aka na IT.
Anyị na-ebi n'ime ụwa afọ ojuju ebe ndị ọchụnta ego anaghị enwe ọmarịcha oge. Ọsọ ọsọ na nghọta oge bụ igodo iji nweta nnweta, ntụgharị na njigide usoro na asọmpi asọmpi taa. CRM na nchịkọta Ngwaọrụ na-enye ndị na-ere ahịa ikike ịchịkọta ozi maka ebumnuche a, mana naanị ịnweta data anaghị eme ka nsonaazụ ya pụta.
Ndị na-ere ahịa azụmaahịa achọghị data ma ọ bụ ngwaọrụ ọhụrụ iji kwado data. Ha choro enyemaka ichota ihe ndi di na data ha ma ha choro ihe eji eme ihe iji tinye data ahu. Mee ka ndị otu gị nwee ike ime ihe ha maara banyere ndị ahịa gị ka ị nwee ike ịmepụta ahụmịhe bara uru n'ezie na nkwụsịtụ oge na njem ịzụ ahịa.
Ndị na-ere ahịa achọghị data ọzọ. Ha choro enyemaka iji ya - nke ahụ bụ ihe na-efu na nchịkọta ahịa taa. Anyị mere nyiwe anyị ka anyị nwee ike iwekọta nke ọma n'ime ngwungwu ahịa dị ugbu a, na-enweghị enyemaka nke ndị otu IT, yana iji ọrụ njirimara dị mfe ka ndị ọchụnta ahịa nwee ike iwulite ma mekọrịta ndị na-ege ntị gafee ọwa n'ime ihe gbasara sekọnd. Fayez Mohamood, onye nchoputa, na onye isi nke Bluecore
Dika ihe jikọrọ ya na ahia ahia gi, Bluecore’s Decisioning Platform n’enweghi ike ijiko isi data, dika CRM, ngwa ahia na ebe ahia eCommerce, ya na teknụzụ ndi n’esoro gha agwa ndi ahia gi okwu. N'ime ime nke a, usoro ikpo okwu a na - eme ka data buru ibu na sekọnd, na - eme ka ọ rụọ ọrụ ozugbo maka ndị na - ere ahịa iji wuo ndị mmadụ, nke nwere ike ịgụnye ndị ahịa gị kachasị baa uru, ndị na - azụta ego, ndị ahịa na - achọ iwe. Ndị na-ere ahịa nwere ike itinye mkpọsa n'ofe ọwa dị ka email, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọchụchọ na saịtị.
Nweta Bluecore Decisioning Platform Demo
Ka anyị were otu ihe atụ si na akpụkpọ ụkwụ egwuregwu na egwuregwu na-ere ahịa:
Dịka otu n'ime ndị nrụpụta elu ụwa niile, ndị na-ere ahịa na ndị na-ekesa ahụike na ụdị akpụkpọ ụkwụ, uwe na akụrụngwa, akara ụwa a amarala kemgbe maka ị na-eduga usoro dijitalụ ma na-enye ndị na-ege ya ntị ahụmịhe ahụmịhe n'ezie - ma n'ime ụlọ ahịa ma n'ịntanetị. Ma dị ka ọ dị maka ọtụtụ ndị na-ere ahịa n'ịntanetị, ọkachasị ndị sitere na nnukwu ụlọ ọrụ nwere nrụrụ mgbagwoju anya, ịnweta na ime ihe ngwa ngwa na data ndị ahịa gosipụtara ihe ịma aka maka ụlọ ọrụ ahụ.
Iji merie nsogbu a, ndị na-ere ahịa tụgharịrị na Bluecore ka:
Nyochaa ma chọpụta ọkwa mmekọ ndị ahịa na-eji ezigbo oge data ndị ahịa
Zipu ozi-e webatara nkeonwe nke ukwuu, ọdịnaya mgbasa ozi mmekọrịta, mgbasa ozi ngosi na ahụmịhe saịtị
Kpughee nghọta ndị ahịa na-eme ihe ma na-emepụta ndị na-ere ahịa na-ere ahịa na sekọnd nke dabere na data akụkọ ihe mere eme na amụma algorithms
Mee ka ndị na-ege ntị ngwa ngwa gafee email, mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ọwa ozi iji rụọ ọrụ mgbasa ozi ọtụtụ ọwa na-enweghị ọrụ ngalaba IT.
Tupu Bluecore, anyị enweghị ohere zuru oke na data ndị ahịa anyị. Anyị enweghị ike ịmegharị ya n'ụzọ dị mfe ma ọ bụ see omume na ya. Anyị ghọtara na Bluecore enweghị ike inyere anyị aka idozi nsogbu a, mana enwere ike idozi ya n'ebughị ibu na ngalaba IT anyị zuru ụwa ọnụ. Nke a bụ nnukwu ebe anyị na-ere, dị ka interface Bluecore na-agbanwe ma dịkwa mfe iji mee ka anyị nwee ike ịdebe mkpọsa ahịa anyị ebe ha kwesiri ịdị - n'ime ngalaba ahịa, ọ bụghị n'aka ngalaba IT anyị. Inwe ike iweghachite njikwa mgbasa ozi ahịa anyị dị ukwuu. Anyị ahụbeghị ikpo okwu dị mfe iji ma ọ bụ ngwa ngwa mejuputa na ngwaọrụ ọ bụla ugbu a. Onye na-ere ahịa na onye isi njikwa CRM
Ndị na-ere ahịa na-eji ihe a Ihe Mkpebi Mkpebi Bluecore iji nyochaa ngwa ngwa ma jikọta data, mepụta ndị na-ege ntị na sekọnd ma mejuputa mkpọsa mgbasa ozi gburugburu mgbasa ngwaahịa ọhụrụ. Kpọmkwem, ika ahụ eritela uru site na isi ụzọ atọ eji eme ihe:
Asingbawanye Nchịkwa Ahịa na ịnweta data
Tupu imejuputa Bluecore, imepụta mkpọsa email chọrọ enyemaka nke ngalaba ụlọ ọrụ IT ma nwee ike iburu ebe ọ bụla site na 40 ruo ụbọchị 60 ịmalite. Na Bluecore, agbanyeghị, ndị ahịa ahụ nwere ike ịnwale ma mejuputa mgbahapụ ezubere iche na ndụ na-ebute mkpọsa email na ụbọchị.
Na mgbakwunye na inye aka izere iwekọ oge IT na mgbagwoju anya IT, Bluecore mekwara ka ọ dị mfe maka ndị na-ere ahịa ka ha nwee ike ịmekọrịta mkpọsa ndị a na ndị mmekọ teknụzụ ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, otu ndị ahịa nwere ike ịme mkpọsa ezubere iche maka ndị na-azụ ahịa dị elu na obodo ndị bụ isi (ntụgharị Boston, New York City, Los Angeles) ma jikọta data na Handstand Fitness App iji nye ndị na-azụ ahịa na mpaghara ndị ahụ ọzụzụ ọzụzụ onwe onye n'efu. .
Ihe ndị dị mkpa nke mbọ ndị a gụnyere:
Ikike ịkọwapụta ọtụtụ ndị ahịa nọ na saịtị ahụ ma malite mgbasa ozi na-echegharị ihe na Bluecore ma e jiri ya tụnyere ụlọ ahịa na-ere ahịa gara aga, SaleCycle
Ọnụ ọgụgụ dị elu na-emeghe ma pịa na Bluecore karịa nke SaleCycle, na-eduga na nloghachi na ntinye nke 10: 1
Vingkwalite Omnichannel Brand Promotion
Mgbe ndị na-ere ahịa ahụ ghọtara mkpa ọ dị ịhazi nkwukọrịta na-agbanwe agbanwe gafee ọwa, ọ tụgharịrị na Bluecore maka enyemaka. Dị ahụ malitere mgbalị nkwalite omnichannel ya na mwepụta akpụkpọ ụkwụ ọhụrụ na akara egwuregwu na-ewu ewu. Iji malite, ụlọ ọrụ ahụ jiri Bluecore's Decisioning Platform rụọ ezigbo ndị na-ege ntị nke ndị ahịa nwere nnukwu mmekọrịta ịzụta ngwaahịa sitere na akpụkpọ ụkwụ. O nyeziri ahụmịhe nke ahaziri iche maka ndị a na-ege ntị site na iji Bluecore iji rụọ ọrụ na-enweghị nsogbu na nyiwe nnabata onsite ma dozie mpempe akwụkwọ okike na-elu iji gosi akpụkpọ ụkwụ ọhụrụ na ngwaahịa ndị ọzọ site na otu akara ahụ. Companylọ ọrụ ahụ werekwa mgbalị ndị a site na ijere ihe okike yiri nke ahụ n'ime mgbasa ozi Facebook yana site na mkpọsa ahịa email nye ndị ahịa ahụ nwere nnukwu mmekọ iji zụta dịka nke Bluecore kwuru.
Iji gbasaa ndụ nke ọrụ mkpọsa mkpọsa ma mee ka ọdịnaya dị ọhụrụ maka ndị na-azụ ahịa bara nnukwu uru, ndị otu ahụ webatara mkpali pụrụ iche maka ndị ọbịa na ndị na-azụ ahịa na-anata ozi nke abụọ na-enye ohere ịbanye n'otu n'ime ihe omume ụwa kachasị ukwuu.
76% buliri na clicks maka ọdịnaya nke ahaziri iche
Mgbakwunye ntụgharị site na 30% na mgbapụta ụgbọ ala maka mkpọsa nke gụnyere mgbakwunye agbamume nke ntinye ihe omume n'efu
Chọpụta Ndị Na - ege Ntị Ọhụrụ Maka Icheta Na Ọwa Ọwa
Bluecore nyekwara ndị na-ere ahịa aka aka iji nwee ike ime ka ndị na-ege ya ntị na ọwa ọhụrụ site na ịme mkpọsa mmekọrịta mmadụ na ibe ya na mwepụta nke ngwaahịa ọhụrụ hype. N'iji oge eji eme mkpebi nke Bluecore, ụlọ ọrụ ahụ wuru ndị na-azụ ahịa na-ele ngwaahịa ọhụrụ n'ime ụbọchị 60 gara aga mana ha azaghị ma lekwasị ha anya na mgbasa ozi Facebook.
Na mkpokọta, Bluecore's Decisioning Platform enyerela ndị otu na-ere ahịa azụmaahịa a aka ịchịkwa data ndị ahịa, mee ka data ahụ rụọ ọrụ ma jiri ya mee ihe n'ụzọ ọgụgụ isi, nke ahaziri iji melite arụmọrụ n'ofe ọwa. Kemgbe ọ na-arụ ọrụ na Bluecore, onye na-ere ahịa ahụ amụtala na ị nweta nsonaazụ ndị a abụghị ị nweta ugwu nke data ndị ahịa n'otu ebe. Kama nke ahụ, ọ bụ maka iweta usoro mkpebi nke etu esi eji nghọta ndị ahụ niile eme otu ebe.
Nghọta ndị na-ege ntị
Site na nghọta ndị na-ege ntị, ndị na-ere ahịa eCommerce na-enweta ohere kachasị ngwa ngwa na nke miri emi maka njirimara omume na ngwaahịa maka akụkụ ọ bụla na-ege ntị ha họọrọ ịmepụta. Ozugbo ndị na-ere ahịa na-emepụta ndị na-ege ntị n'ime Bluecore, ha nwere ike ịnweta Nghọta Ndị Na-ege Ntị iji were anya nke uche hụ otu amụma si arụ ọrụ ma gbanwee, wee mezie mkpọsa na usoro iji bulie nsonaazụ.
Site na nghọta ndị na-ege ntị, ndị isi azụmaahịa nwere ike ịmụta etu akụkụ ndị ahịa ha kacha baa uru si arụ ọrụ metụtara ndị otu ahịa ndị ọzọ, yana otu mkpọsa ha si eso ndị ahụ. Ndị na-ere ahịa nwere ike nyochaa izu data a karịa izu ma kwado atụmatụ azụmaahịa megide akụkụ ụfọdụ nke ndị ahịa ha.
Dashboard Audience Insights na-aza ajụjụ ndị a:
Gịnị bụ uru nke ndị a na-ege ntị? Ileba anya na pasent nke ego zuru ezu, nkezi uru uru (AOV), nkezi ọnụ ọgụgụ nke ngwaahịa na usoro ọ bụla, ọnụ ọgụgụ ndụ ndụ na nkezi ndụ ọhụụ buru amụma
Kedu ihe bụ ahụ ike nke ndị na-ege ntị? Ndakpọ nke ndị ahịa furu efu, ndị na-arụsi ọrụ ike na ndị nọ n'ihe ize ndụ
Ebee ka m nwere ike ịkpọtụrụ ndị a? Nkọwa banyere ole ndị ahịa na otu ndị na-ege ntị nwere ike iru na ọwa enyere, dị ka email, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ngosipụta ma ọ bụ onsite
Kedu ka ndị na-ege ntị si etinye aka na ngwaahịa? Ihe ngosi “Rockstars,” “Cash Cows” na “Hidden Gems”
Kedu ka ndị na-ege ntị si etinye aka na saịtị m? Jiri nlezianya ghọta ihe omume, mmemme ntụgharị saịtị na atụnyere mmemme saịtị
Kedu ka ndị na-ege ntị si etinye aka na ozi ịntanetị m? Echiche zuru ezu banyere izipu ozi, meghere, ma pịa, yana ndị na-edeghị aha na-adabere na ngalaba ndị na-ege ntị
Kedu ndị bụ ndị ahịa kachasị amasị? Nlele a na-amaghị aha ndị na-azụ ahịa "ndị na-emefu ego kachasị elu," "ndị nyocha kachasị elu" na "ikike kachasị elu"
Gụkwuo gbasara nghọta ndị na-ege ntị
Tags: nghọta ndị na-ege ntịacha anụnụ anụnụmkpebiozugbo
WordPress: Ghichaa Shortcode Site na Okwu Nne na Nna na Okwu Nwa Gị